Baolina kitra – « Mondial 2022 » :: Tafara-bondrona amin'ny firenena telo antonontonony ny Barea • AoRaha
Afaka an’ireo firenen-dehibe. Nandova vondrona misy firenena telo mitovy herijika amintsika ny Barean’i Madagasikara amin’ny fifanin­tsa­nana hikatsahana tapakilan’ ny fiadiana ny amboara mane­ran-tany, hatao any Katara amin’ny taona 2022. Hiaraka amin’ny Repoblika Demokra­tikan’i Congo sy Benin ary Tanzania, azo faritana ho tsy goavana loatra, amin’ny vondrona J i Madagasikara, taorian’ny antsapaka notanterahina tany Le Caire, Ejypta, omaly.
Ekipa roa amin’izy ireo no niara-niatrika ny dingan’ ny famaranan’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika (CAN 2019) tamintsika tany Ejypta. Lavontsika teo amin’ny dingan’ny ampahavalon-dalana, tamin’ny alalan’ny « tirs au but » (4 – 2), ny Léopards avy any RD Congo, rehefa nisaraka tamin’ny ady sahala samy tsy nitoko teo amin’ny 120 minitra nilalaovana. Tombanana hanatante­raka ny valifatiny izy ireo amin’izany. « Ny RD Congo no ekipa azo heverina ho goavana aloha amin’ireo mpifanandrina amintsika. Tsy maintsy hamaly ny fahareseny teo amin’ny ampahavalon-dalana izy ireo amin’io », hoy i Titi Rasoanaivo, mpanazatra ny ekipan’ny Fosa Juniors avy any Boeny.
Talohan’io dia efa nanilika antsika teo amin’ny fifa­nintsanan’ny CAN 2017 ny RD Congo. Resin’izy ireo tamin’ny tambatr’isa 8 noho 2 (2 – 1, 6 – 1) ny Barean’i Madagasikara tamin’izany. Efa niatrika ny Mondial ihany koa ity firenena ity tamin’ny mbola nitondrany ny anarana Zaïre, tamin’ny taona 1974.
Nandavo an’i Maraoka
Nataon’ny firenena tohatra fiakarana kosa ny Taisafs Star avy any Tanzania tamin’ny CAN 2019 tany Ejypta. Niaraka vondrona tamin’izy ireo tamin’izany i Alzeria, tompondakan’i Afrika (3 – 0), sy Kenya (3 – 2) ary Sénégal (2 – 0). “Firenena azo ihoriranana i Tanzania saingy tsy maintsy manomana fatratra izy ireo, satria nalaza loatra
i Madagasikara tamin’ny CAN 2019”, hoy hatrany i Titi Rasoanaivo. Mbola tsy niatrika Mondial izy ireo.
Tsara toerana kosa i Benin tamin’ny nametrahana azy tao amin’ny satroka faharoa, talohan’ny antsapaka. Tafiditra ho laharana fahatelo mendrika i Benin ary tafita hatreo amin’ ny dingan’ny ampahefa-dalana vao nahintsan’i Sénégal (1 – 0). Teo amin’ny ampahavalon-dalana dia resin’i Ecureuils avy any Benin tamin’ ny alalan’ny “tirs au but” i Maroc (1 – 1, tab: 4 – 1). “Henjana i Benin matoa tafita hatreo amin’ny dingan’ny am­­pahefa-dalan’ny Can 2019. Mila miady mafy ny Malagasy satria fahadisoana kely no tsy nahatafita azy ireo tany amin’ ny manasa-dalana tany Ejypta”, hoy hatrany i Titi Rasoanaivo. “Miankina amin’ny fanoma­nan­tena sy ny fifantohana amin’ ny lalao no mety hahatafita antsika”, hoy hatrany izy.
Baolina kitra – Analamanga :: Hanokatra ny lalao ny Disciples FC sy ny AS Saint Michel
Antso vonjy :: Mila fanampiana ity zaza miaina amin’ny ôksizena, efa ho valo volana